Were Nchegbu Si Celebrations na ndị a Party Planning Atụmatụ - News Ọchịchị
Were Nchegbu Si Celebrations na ndị a Party Planning Atụmatụ
-Eme atụmatụ a party nwere ike ịbụ a otutu fun ma ọ bụrụ na ị na-enwe mba ihe, ma ha nwekwara ike ịbụ n'ezie na-akpata nchekasị dị ka ị ụdị nile nke nkọwa, AKWỤKWỌ nile nke mgbere, ma gbagote na ndị ọbịa ndepụta.
ekele, E nwere ọtụtụ ụzọ na-echegbu si ememe na ụfọdụ kemfe party atụmatụ Atụmatụ. Lelee ndepụta dị n'okpuru maka a ole na ole nke ndị a Atụmatụ otú i nwere ike n'ezie na-enwe na minit ọ bụla nke ihe omume ime atụmatụ usoro.
Mfe a eyen si ụbọchị ọmụmụ Party
Mgbe atụmatụ a ụbọchị ọmụmụ ọzọ ka nwatakịrị, ọ pụrụ isi ike ime ka a larịị isi. Cheta na ụmụaka na-adịghị mkpa ukwuu site n'ụzọ nke fancy nri na ndozi; ha dị nnọọ chọrọ nwere fun. N'ilekwasị anya na-eme ka ha dịrị n'oge ihe omume bụ ihe mbụ ị nzọụkwụ kwupụta a ịga nke ọma party, otú anya n'ime ibiaghachi ụlọ ebiri, egwuregwu, movies, etc.
Ọzọkwa, ị na-adịghị ọbụna mkpa n'ezie na-elekwasị anya na a zuru menu maka gị ọbịa n'ihi na ụfọdụ Pizza na a otutu nke onwe-eje ozi snacks, tinyere achicha na ice ude, kwesịrị zuru ezu. Na-na ihe omume obere na mfe, site akwụkwọ ịkpọ òkù ahụ na ọbịa ndepụta, ka ihe ndozi na party hụrụ, na na-na nwa gị mkpa, temperament, na mmasị n'uche.
Ịnọgide na-enwe Nsuso Nọrọ Haziri
-Anọ ahazi ofụri party atụmatụ usoro nwere ike ime ebube na-ebelata nrụgide. Ị nwere ike na-a ole na ole anatara, gụnyere a-nwe ndepụta, ihe na nke i kwesịrị imezu tupu nnukwu ụbọchị, na ị nwere ike ịlele kwụsịrị ihe na anatara ka unu na-.
The nwe ndepụta kwesịrị ka ihe niile i nnọọ ga-emezu. Mgbe ahụ i nwere ike a shopping ndepụta niile nke onunu ị chọrọ iji nweta, na i nwekwara ike inwe gị ọbịa ndepụta na-esochi nke dietary mgbochi, RSVPs, na ozi kọntaktị.
Guzosie a isiokwu nke Party
-Eche echiche banyere ihe niile nke nkọwa gị mkpa aka idozi maka a party nwere ike maa ihe karịrị anyị ike, ma i nwere ike na-amalite ime ka gị nchegbu etoju ala nanị site guzosie ike ihe bụ isiokwu nke ihe omume ga-. Ma ị na-atụba a party nwa gị, a lara ezumike nká party na nna gị, ma ọ bụ a party usọrọ di gị nkwalite, ị nwere ike mgbe niile-ahụ a fun na classy isiokwu eme ihe iji na nke nkọwa ọnụ.
Ozugbo ị ka a isiokwu, ị kwesịrị ị na-ahụ na-eme na decorations ụdị ịda nri n'ime ebe. Ị ga-enwe ike n'ịwa echiche na-ọzọ mfe na ịmata kpọmkwem ihe ị chọrọ ịzụta na-ewetara gị isiokwu ndụ.
Atụla egwu-arịọ maka enyemaka
Ọ dịghị onye mgbe kwuru na ị ga-atụmatụ a party niile site onwe gị. Weta ụfọdụ n'ime nchegbu anya nke onwe gị site ego ụfọdụ helpers na ịkwụ ha, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ha pụrụ inyere n'oge atụmatụ usoro ma ọ bụ n'oge ihe omume onwe ya iji jide n'aka na ihe niile na-agba ọsọ were were.
Ozugbo ị chepụta otú na-echegbu si party atụmatụ, ị pụrụ n'ezie na-enwe dum usoro, karịsịa ihe omume na njedebe nke ọ nile.
← Tipron: A Rolling emetụ nwa anya robot projector [Na] Alzheimer ọgwụgwọ ná mma dị ka ụbụrụ mbufụt gosiri na-isi →